BMA Archives - News @ M-Media
ဦကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာမွတ်စလင် အစည်းအရုံး(BMA) ၏ ကြေညာချက်
အထူးကြေကွဲဝမ်းနည်းကြောင်း ကြေညာချက် ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၇ အစိုးရအစီအမံဖြင့် အင်ဒိုနီးရှားသို့သွားရောက်ပြီး ပြန်ရောက်လာသော တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီကို ဇနဝ္နါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၇နေတွ့င် ရန်ကုန်လေဆိပ၌် အစီအစဉ်ရှိရှိ သွေးအေးအေးဖြင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံရသဖြင့် မြန်မာမွတ်စလင်[Read More…]
အကြမ်းဖက်မှု၊ ခြိမ်းချောက်မှုများကို မြန်မာမွတ်စလင်မ် အစည်းအရုံး (BMA)မှ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချ
သြဂုတ် ၄၊ ၂၀၁၆ M-Media သတင်း- သီဟ . မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ် နာဂျစ်ရာဇက် အပါအ၀င် ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ် ကိုးဦးအား ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သည့် စာတစ်စောင်ကို အိုင်အက်စ်တို့က နီဂရီဆမ်ဘီလန်ပြည်နယ် ရဲစခန်းသို့ သြဂုတ်[Read More…]
August 4, 2016 — ကြေငြာချက်
ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုများ ချုပ်ငြိမ်းရေး လန်ဒန်မြန်မာ သံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြ
ဇွန် ၃၀ ၊ ၂၀၁၆ M-Media သော်တာလွင်- သတင်းပေးပို့သည်။ . ယနေ့ ၃၀-၆-၂၀၁၆ လန်ဒန်မြန်မာ သံရုံးရှေ့တွင် မြန်မာမွတ်စလင် အစည်းအရုံး (B.M.A) မှ ဦးဆောင်ပြီး ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုများ ချုပ်ငြိမ်းရေး၊[Read More…]
June 30, 2016 — မြန်မာသတင်း
နိုင်ငံသားများ၏ လုံခြုံရေး အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိ ကြောင်း မြန်မာမွတ်စလင် အစည်းအရုံးပြော
ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝေါမြို့နယ်၊ သူရဲသူမိန်ကျေးရွာ တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးမှုများအပါအဝင် လက်တလော ဖြစ်ပွားနေသည့် အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မြန်မာ မွတ်စလင် အစည်းအရုံး (B.M.A) က[Read More…]
June 27, 2016 — ကြေငြာချက်